ओन्टारियोमा ४० बर्ष माथी उमेरका लागि भ्याक्सिन भोली मंगलबार बाट! वालमार्ट फार्मेसीले पनि भ्याक्सिन दिन सुरू गर्ने । - AIM Khabar
गृह पृष्ठ > Breaking > ओन्टारियोमा ४० बर्ष माथी उमेरका लागि भ्याक्सिन भोली मंगलबार बाट! वालमार्ट फार्मेसीले पनि भ्याक्सिन दिन सुरू गर्ने ।
Breaking क्यानडा विशेष स्वास्थ्य
April 19, 2021 April 19, 2021 Raju Thapa190
राजु थापा, ओन्टारियो । अप्रिल १९, २०२१ । भोली एप्रिल २० देखि कोभिड संक्रमित बढि भएको क्षेत्रबाट ४० बर्ष माथिका इच्छुक ब्यक्तिहरुलाई तोकिएको स्थान बाट एस्ट्राजेनिका भ्याक्सिन लगाउने भएको छ । उक्त भ्याक्सिन लगाउन चाहनेले अनलाईन मार्फत बुकिंग गर्नु पर्ने छ । त्यसका लागि www.covid-19.ontario.ca क्लिक गर्नु हुन अन्टारियो सरकारले अनुरोध गरेको छ ।
नेपाली समूदायका सदस्यहरुका लागि भ्याक्सिन सम्बन्धि सहयोग आबस्यक परेमा हेल्पिंग ह्यान्डले अप्रिल १७ तारिख शनिवार देखि हेल्पलाईन सुरु गरेको छ । उक्त हेल्पलाईन नं: 226-884-9351 मार्फत नेपाली भाषामा सहयोग गर्ने छ ।
भ्याक्सिन लगाई सकेका नेपाली समूदायका सदस्यहरुको अनुभव तलको भिडियो मार्फत सुन्न सक्नु हुनेछ ।
नेपाली जनसम्पर्क समिति (एनपिसिसि), क्यानडाको दोश्रो अधिबेशन सम्पन्न, छरिएका सबै डेमोक्रेटहरुको एकता छिट्टै हुने सन्देश ।
April 29, 2019 April 29, 2019 Raju Thapa
TTC buses and streetcars avoiding downtown Toronto tonight for Game 6
June 13, 2019 GRISHI
कोरोना,स्वास्थ र प्रणायाम ।
April 27, 2020 January 19, 2021 GRISHI